एकै बर्षमा बाबु, बाजे र बजैको मृत्यु, मागेर किरिया बस्दै १२ वर्षीय बालक - ramechhapkhabar.com – ramechhapkhabar.com
एकै बर्षमा बाबु, बाजे र बजैको मृत्यु, मागेर किरिया बस्दै १२ वर्षीय बालक
काठमाडौं , २६ कार्तिक ।
उमेर १२ वर्ष । झोलाभरी किताब बोकेर स्कुल जाने बेला । अनि आमा बुवाको काखमा खेलेर कुदेर घुर्काएर, रोएर हाँसेर खाने उमेर । तर, मुगुका १२ वर्षीय युवराज कुमाल यतिबेला आफ्नो हजुरआमाको किरिया बसेका छन् ।
कात्तिक अन्तिम र मंसिर सुरुवातको अनि मुटु नै छेड्लाजस्तो चिसोमा यी बालक आँखाभरी आँसु र कहिल्यै नभोगेको पीडा र संस्कार र संस्कृतिको नाममा एकसरो सेतो कपडामा बाजेको किरिया बसेका छन् ।
बाजेको किरिया नातिले बस्नुपर्ने होइन तर, समय अनि परिस्थितिले त्यस्तै पारिदिएको छ युवराजको परिवारमा । एक वर्षभित्रै यी बालकको परिवारमा तीनजनाको मृत्यु भएको छ । बुबा, हजुरबा अनि हजुरआमाको ।
परिवारमा गरिबको व्यथा त छँदै थियो त्यसमाथि एकैवर्षभित्र बाबु, बाजे र बजैको मृत्यू भएपछि यो परिवारै शोकमा डुबेको छ ।
मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिका–११ र्याङ्गचेकाटी गाँउका यो परिवारमा तीनैजनाको मृत्यू भएपछि छाकको जोहो गर्नसमेत मुस्किल परेको छ । नत घरमा खाना छ, न शरिर ढाक्ने कपडा ! न त ओढ्ने, नत ओछयाउने कपडा नै छन् । नत घरको छाना त्यसमाथि एकैबर्ष बाबु, बाजे र बजैको मृत्यू भएपछि परिवारको बिचल्ली भएको छ ।
बाजे बजैसहित ८ सदस्यीय यो परिवारको मुखमा माड लगाउन बाबु र बाजेले गाँउघर र अन्यत्र ज्यालादारी काम गदै आएका थिए । तर गतवर्ष असोज ७ गते युवराजका बाबु पुर्णबहादुर कुमाल (२८), आसाढ २१ गते बाजे जयरुप कुमाल र १३ गते (बिहिवार) बजै चाउली कुमालको मृत्यु भएपछि घर अभिभावक बिहिन बनेको छ ।
घरमा भएका ४ बालबालिका मध्ये जेठा १२ वर्षिय युवराज कुमालले बाबु पछि हजुरबुवा, हजुरबुबापछि हजुरआमाको पनि मृत्यु भएपछि युवराज किरिया बसेका हुन् । किरिया बस्दा १३ दिनसम्म नुन खान नहुने र दिनदिनै नुहाउनु पर्ने कारणले युवराजको मुख शरिर सुन्निएको उनकी आमा शौमति कुमालले बताईन् । घरका ठूला र अविभावक कोही नभएपछि आमा सौमती कुमालले युवराजसहित अन्य ३ बालबालिकालाई गाँउ चहारेर छरछिमेकीलाई हातजोडी जम्मा गरेको खानाले पेट पाल्दै आएकी छन् ।
जसोतसो गाँउलेहरुले दैनिक माना उठाएर बजैको किरिया बसेका १२ बर्षीय बालकलाई पाल्दै आएको र अन्य परिवारको बिचल्ली भएको र्याङच्याकाटी गाउँका हस्त नेपालीको भनाई छ । घरमा पशुपालन, व्यापार–व्यवसाय केही नहुँदा शौमतिलाई चार सन्तान हुर्काउन अत्यन्तै मुस्किल भइरहेको छ ।
खानाको मात्र समस्या होईन लगाउने, ओढ्ने ओछ्याउने लुगा छैनन् । घर भत्किएको छ । छानो छैन हिउँ परे चिसो कसरी कटाउने भन्ने परिवार पीडामा छन् ।
९ वर्षे छोरी झरना कुमाल, ७ बर्षे छोरा विराज कुमाल र एक २ बर्षे कोखे छोरा काखमा रहेको र जेठो छोरा १२ बर्षको युवराज कुमाल बजैको किरियापुत्री बसेको बताउँदै आमा सौमती कुमाल भन्छिन्, ‘घरमा खाना लाउनका लागी दुख्ख पाएकै थियौं, जसोतसो श्रीमान र ससुराले कमाई घर धानेकै थिए । हामीमाथि के दशा लाग्यो ! १ वर्ष पहिले श्रीमान बिते असाढमा ससुरा अहिले सासु बितिन् ।’ आमाबाबुको काखमा रमाउने उमेरमा १२ बर्षको छोरो किरिया बस्नु परेको भन्दै शौमति पीडा व्यक्त गर्छिन् ।
यो परिवारमा आईपरेको दुःख देखेर गाँउ मात्र होईन थाहा पाउने जोसुकै भावविह्ल हुने गरेका छन् । त्यसमाथि १२ बर्षे बालकले एकै बर्षमा बाबु, बाजे र बजैको किरिया बस्नु परेको अवस्थाले गाउँलेलाई झन् भावबिह्ल बनाएको छ ।
सधै अरुको काम गरेर पालिदै आएको यो परिवार अहिले घरमा कमाउने कोही नहुँदा भोकभोकै बस्नु पर्ने अवस्था छ । छरछिमेकी र मामा घरकाले दैनिक मानापाथी दिई हालसम्म पालिदैँ आएपनि अब उनीहरुको भविष्य के हुने अन्यौल छ ।
राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, गाँस र बास नभएको नागरिक हुनै छैन यी नागरिकका नैर्सगिक अधिकार हुनेछन् भनेर संवैधानिक प्रावधान राखेपनि त्यो प्रावधान र विधान यस्तो परिवारका लागि ‘आकाशको फल आखाँ तरि मर’ सरह भएको छ ।
घरको छानो छैन हिउँदको सिजन शुरु भयो, हिउँ, पानी पर्ला हिमालको चिसोमा यो परिवार कसरी बस्ने हो । कुनै सरकार, व्यक्ति, संघ सस्थाले सहयोग गरिदिए हुथ्यो, हामी पनि त्यस्तै छौं अर्काको घरमा ज्याला मजदुरी गरि खान्छौ गाँउले भने ‘सबै गरिब छौ यो बिचल्ली परिवारलाई सहयोग गरिदिने को होला ?’